07/15/12 ~ Myanmar Forward
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဆီရမ်ရိမြို့၌ ကျင်းပသည့် အမေရိကန်- အာဆီယံ စီးပွားရေးဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆီရမ်ရိမြို့၌ ကျင်းပသည့် အမေရိကန်- အာဆီယံ စီးပွားရေး ဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါလျက် ယနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီ (၁၅) မိနစ်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း အထူးလေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
ပြည်မြို့ မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီးကျောက်ရုပ်ရှေ့တွင် လွမ်းသူပန်းခွေချခွင့်မပြု
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစီးကျောက်ရုပ်ရှေ့တွင် NLD အဖွဲ့ချုပ်ပန်းခွေ
၊ကျာင်းသား ၊လူထု ၊လူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့်
ဋ္ဌာနဆိုင်ရာများ ပန်းခွေများချခဲ့သည် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
One World Beta.com; July-13(Fri)
ဆိုမာလီနိုင်ငံ၏ တစ်နှစ်ကြာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်မှုများကြောင့် တစ်နှစ်အတွင်း ဒါဒါအပ်မြို့သို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည်များရှိသည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းသည် ရန်ပုံငွေ အကျပ်အတည်းပြတ်လပ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ကျန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းဖြင့် လုံလောက်အောင် မကျွေးမွေးနိုင်သဖြင့် အနည်းဆုံးဒုက္ခသည် ၂ဝဝ,ဝဝဝ ခန့်မှာ ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရာရှိကြောင်း7aid agencies အုပ်စုမှ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒုက္ခသည်သောင်းပေါင်းများစွာ၏အသက်ရှင်ရေးအတွက် လက်ရှိငွေနှင့် ၂ လ၊ ၃ လအတွင်း ပြတ်လပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဒုက္ခသည် အရေးကိစ္စအားဖြေရှင်းရာတွင် ရေရှည်ကာလအတွက် ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းနှင့် အကူအညီပြတ်လပ် သွားသည့်ကြားကာလတွင် ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေ ဆိုးဝါး သွားနိုင်ကြောင်း ၎င်းအေဂျင်စီမှ သတိပေးတောင်းဆိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒါဒါအပ်မြို့သည် လူဦးရေတိုးပွားမှု တတိယအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်က လူဦးရေ ၄၆၅,ဝဝဝ ရှိခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင်ပစ်စူဝမ်
အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး Dr. Surin Pitsuwan က ဘင်ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း အတွင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်း ကြောင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် စတုတ္ထအကြိမ် ဆွေးနွေးရန် အစိုးရတပ်မတော်က ထပ်မံကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာ ပြောကြားခဲ့သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စစ်ဦးစီးချုပ်များ ဇူလိုင်လဆန်းတွင် ဗန်းမော်မြို့၌ ဆွေးနွေးရန် အစိုးရတပ်မတော်က ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲများကြောင့် ကေအိုင်အေမှ လက်ခံခြင်း မရှိဘဲ လွယ်ဂျယ်မြို့အနီးရှိ မိုင်ဂျာယန်ဒေသ၌သာ ဆွေးနွေးရန် ပြန်လည် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းကိုလည်း အစိုးရတပ်မတော်က လက်မခံသည့်အတွက် အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
Yahoo! အသုံးပြုသူ ၄ဝဝ,ဝဝဝ ၏ Username, Password များအား Hacker သမားများမှ ခိုးယူခြင်း
Yahoo!အသုံးပြုသူ ၄ သိန်းခန့်နှင့် အခြားကုမ္ပဏီအသုံးပြုသူများ၏ ကွန်ပျူတာများထဲမ Username နှင့် Password များကို အမည်မသိရသူ Hacker သမားများက ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ခိုးယူခဲ့ကြောင်း Yahoo! မှ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သူခိုးသည် အားနည်းချက်ကိုရှာ၍ ဝင်ရောက်ခိုးယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Password ပြောင်းလဲအသုံးပြု သူများနှင့် သတိပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် သံသယဖြစ်ဖွယ်စာရင်း အတိအကျအား ရွေးထုတ်ရန်မလွယ်ကူကြောင်း၊ Hacker အဖွဲ့သည် အများပြည်သူသုံး Website များတွင် ဖော်ပြ ထားသည့်လိပ်စာများအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသိရှိပြီး Password များခိုးယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Yahoo! ပိုင်ဆိုင်သည့် Webserver အနေဖြင့် လုံခြုံရေးအရ ယိုပေါက်မှုများစွာရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ခိုးယူခံရခြင်းမှာ ကြီးမားသောထိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း D33DS ကုမ္ပဏီမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။Hacker များအနေဖြင့်Yahoo Voice ကိုလည်း ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံ၏နာမည်ကျော် ပေါ့အဆိုတော် တေလာဆွိသည် အသက် ၃ဝ အောက်အမျိုးသမီးဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး စာရင်းတွင် ဖော်ပြခြင်း ခံရပါသည်။ တေလာဆွိမှာ အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိပြီး ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မေလအထိ ၁၂လတာ ကာလအတွင်း ဝင်ငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၇သန်း ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း ၁၂ လတာ ကာလတွင်မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့်သြစတြေးလျ အပါအဝင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မှု တစ်ခုလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်းဝင်ငွေရှိကြောင်း၊ Multi-platimum ဓာတ်ပြားရောင်းရငွေနှင့် ကြော်ငြာ ထုတ်လုပ်မှုများဖြင့် အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း
Forbes ကဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အယ်လ်ဘမ် အသစ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက် အသည်းစွဲ ဂျက်စတင်ဘီဘာမှာ ၅၅ သန်းဖြင့် ဒုတိယလိုက်နေပြီး ရီဟားနားမှာ ၅၃ သန်း၊ လေဒီဂါဂါမှာ ၅၂ သန်းနှင့် ကေတီပယ်ရီမှာ ၄၅ သန်းတို့ဖြင့် ဝင်ငွေအများဆုံး ရရှိကြသူများဖြစ်ပါသည်။ ယမန်နှစ်က လေဒီဂါဂါမှာ ဒေါ်လာသန်း ၉ဝ ဖြင့် ထိပ်ဆုံး ရောက်ရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
မိုးမခ အထောက်တော် ရန်ကုန်
မာလီနိုင်ငံအား စစ်ရေးအရ၀င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခြင်း
မာလီနိုင်ငံ၏မြောက်ပိုင်းနယ်မြေအား အယ်လ်ကေဒါနှင့်ဆက်နွှယ်နေသော စစ်သွေးကြွများက သိမ်းပိုက် ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံများအနေဖြင့် မာလီနိုင်ငံတွင် စစ်ရေးအရ၀င်ရောက် စွက်ဖက် မှုပြု လုပ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လောရန်ဖာဘီယတ်စ်က ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေသတွင်းနှင့် အနောက်နိုင်ငံများမှအစိုးရများသည် မာလီနိုင်ငံ တွင်းအခြေ အနေအား အာဖဂန်နစ်္စတန်နိုင်ငံနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာစွက်ဖက်မှုကို အာဖ ရိက သမဂ္ဂမှ ဦးဆောင် သွားပြီး နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့များကေ ထာက်ကူပေး သွားမည်ဖြစ်ကြော င်းနှင့် ပြင်သစ်နို င်ငံသည် စစ်ရေးအရ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဦးဆောင်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း Fabius ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU)နှင့် အမေရိကန်ကဲ့သို့သော အင်အားကြီးနိုင်ငံများကလည်း လိုအပ်လျှင် ထောက်ပံ့မှုနှင့် လေ့ကျင့်မှု များ ပြုလုပ်ပေးရန်အသင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြော ကြားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က လေကြောင်းမှ napalm သုံးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပြေးလွှားနေကြသည့် ဗီယက်နမ် ကလေးငယ်များ၊ အ၀တ်မပါ ဗလာထီးပြေးလွှားနေသည့် ကလေးငယ်မှာ ကိုးနှစ်အရွယ် Kim Phuc ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံကို အေပီဓာတ်ပုံဆရာ Nick Ut က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး နယူးယောက်တိုင်းမ်က မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးတစ်ထောင်နဲ့ ညီတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ပုံရိပ်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေဟာ အားေ ကာင်းတဲ့ ဆက်သွယ်မှု ပုံစံတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် ဂျာနယ်လစ်ဇင်မှာပေါ့။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ လူတစ်ယောက် ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို အကျဉ်းချုံး ပြောနိုင်သလို စာနဲ့ပြောတာထက် ပိုထိေ ရာက်တဲ့ သတင်းစကားကိုလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်လစ်ဇင် ဓာတ်ပုံပညာဟာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဘာ သာစကား မတူမှုဆိုတဲ့ အတားအဆီးတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘ၀ဖြစ်စဉ်တွေကို မှတ်တမ်းတင် သက်သေ ခံတဲ့အတတ်ပညာလို့ ဆိုကြပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ ပြောစရာ အချက်က သုံးချက်ရှိပါတယ်။ ပထမ ဆုံးအချက်က ဓာတ်ပုံတွေကို ပြင်ဆင်၊ ပြုပြင်ဖော်ပြမှုပါ။ ဒုတိယအချက်က တစ်ပါးသူရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ် တာ လုံခြုံမှုကို ခြိုးဖောက်ရာ ရောက်၊ မရောက် ဆိုတာဖြစ်ပြီး တတိယအချက်က တော့ ဓာတ်ပုံတွေဟာ ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းမှုရှိ၊ မရှိ၊ ဖော်ပြရန် သင့်၊ မသင့် ဆိုတာပါ။
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက မျက်နှာဖုံးတင်ခဲ့သည့် တာလီဘန်တို့က နှာခေါင်းနှင့် နားရွက်များ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည့် အာဖဂန်မိန်းကလေးပုံဖြစ်သည်
ဓာတ်ပုံများကို ပြင်ဆင်၊ ပြုပြင်ဖော်ပြမှု
ပုံ အရည်အသွေးကောင်းအောင် အလင်းအမှောင်ကို ရိုက်ကူးစဉ်က အပြင်မှာ ရှိနေခဲ့တဲ့ ပကတိ အနေ အထားအတိုင်းဖြစ်အောင် အလင်းအမှောင် ချိန်ပြင်ဆင်မှုကတော့ လက်ခံနိုင် ဖွယ်အနေအထားပါ။ ပုံကိုလိုတဲ့အပိုင်းကို ဖြတ်သုံးတာ။ အဲဒီမှာ နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်လာတုန်းက တိုက်ငါးလုံးပါတယ်။ ကိုယ်ပြချင်တာက ဒီဖက်က နှစ်တိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီနှစ်တိုက် ပါတဲ့အထိပဲ ထောင့်မှန် ကျ ဖြတ်ပြီးဖော်ြ ပတာမျိုးကတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လူ ၁၀ ယောက်မှာ ကိုယ်က ဒီသုံးယောက်ပုံ ပုံသုံးချင်တယ်၊ ဒီသုံးေ ယာက်ပုံအထိပဲ ထောင့် မှန်ကျ ဖြတ်(crop)လုပ်ပြီးထည့်တာ ဆိုရင်ရော။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ပြဿနာက သဘောရိုး၊ မရိုးပါ။ ဟိုလူတွေဖြင့်မပါဘဲ ဒီလူတွေဘဲ ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြချင်တဲ့ သဘောဆိုရင်တော့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဒီလူသုံးယောက်ပုံပဲ ထည့်တာကတော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒီလူတစ်ယောက်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ သတင်းမို့လို့ ဒီလူ့ပုံကိုပဲလှီးသုံးတာဆိုရင်လည်း ဒီလူကို နုသွားအောင်၊
ရင့်သွားေ အာင် တမင်သက်သက် မပြင်ဆင်ရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ဓာတ်ပုံ တွေရောပြီး၊ ပေါင်းပြီး ဖော်ပြတာပါ။ အဲဒီမှာလည်း လူ ၁၀ ယောက်အကြောင်း (ဥပမာ၊အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်၁၀ ဦး) ရေးလို့ ဒီလူ ၁၀ ယောက်ပုံ ပေါင်းထား တယ်၊ ပေါင်းထားတယ် ဆိုတဲ့အချက်လည်း ပေါ်လွင်တယ်၊ တခြားထွေထွေရာရာ သဘောလည်း မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ပြဿ နာမရှိပါဘူး။ ပေါင်းစပ်ပြီး Graphic အသွင်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒါပေါ်လွင်ရပါမယ်။
ပြင်ဆင်ပြုပြင်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်မခံကြတဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီဘူးလို့ ယူဆကြတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိပါ တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို ပေါင်းပြီး ဓာတ်ပုံတစ်ခု၊ မြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းလို့ထင်ရအောင် ပေါင်းစပ်ပြီး ဖော်ပြတာဟာ ဘယ်လို ရည်ရွယ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီပါဘူး။
ဓာတ်ပုံမှာ မပါတဲ့အချက်တွေ ဖန်တီးယူ ထည့်ပေါင်းတာဟာလည်း လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ အနီး စပ်ဆုံးဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အစ္စရေးက လက်ဘနွန် ဘေရွတ်မြို့ကို ၀င်တိုက် တဲ့ဓာတ်ပုံပါ။ ဘေရွတ်မြို့ကောင်းကင်ယံက မီးခိုးလုံးတွေ ရှိတာထက်များအောင် ဓာတ်ပုံ သတင်း ထောက် က ပွားထားတဲ့အတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခံခဲ့ရပြီး အဲဒီပုံနေရာမှာ မူရင်းပုံအမှန်ကို အစားထိုး ပြန် လည်ဖော်ပြပြီး တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းက ရိုက်တာသတင်းဌာနက တင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။ မူလတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံ(၀ဲ) ပုံတွင် နောက်ပိုင်း တွင် တောင်းပန်ပြီးနောက် ပြန်တင်ပေး သည့် ပုံ(ယာပုံ)တွင်ပါရှိသော လက်ယာကဘက်ထောင့်တွင် ထွက်နေသည့် ဓားနှင့် သွေးကွက်ကို ဖယ်ရှားထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည် (သွေးကွက်မှာ အဖြူအမည်းတွင် ပေါ်ရန်ခဲယဉ်းသောကြောင့် ၀ိုင်းပြထားသည်)
ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ ပုံရိပ်အချို့ကို ဖယ်ရှားဖြတ်တောက်တဲ့ ကိစ္စဟာလည်း အငြင်းပွားကြတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဓာတ်ပုံ မှာ မဆိုင်တဲ့ လက်တစ်ဖက်က ပါနေမယ်၊ ကြိုးတန်းတစ်ခုက ရှုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဖယ်ထုတ် ပြီး ပြင်ပစ်တယ်ဆိုတာမျိုးက လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ တခြားရည်ရွယ်ချက် မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှာ ဒီကိစ္စ က လည်း ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတယ်လို့ မပြောနိုင်တာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီလို ဖယ်ရှားဖြတ်တောက် မှုကြောင့် ပြဿနာတွေ ဖြစ်ဖူးလို့ပါ။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာကတော့ အစ္စရေးက ဂါဇာကမ်းမြောင်ကို ပိတ် ဆို့ထား စဉ်မှာ တူရကီအခြေစိုက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ သင်္ဘောအုပ်စုက ပိတ်ဆို့မှုကို ကျော်လွှားပြီး ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားစဉ်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၀ တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အစ္စရေး ကွန်မန်ဒိုတွေက အဲဒီသင်္ဘောေ တွကို ၀င်စီးခဲ့ပြီး လူကိုးဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်ကို ရိုက်တာ သတင်းထောက်က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံမှာ အစ္စရေးကွန်မန်ဒိုတစ်ယောက် သင်္ဘောကြမ်းပြင်မှာ လဲနေတယ်၊ ဘေးမှာဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစား တဲ့အဖွဲ့ထဲကသူတွေက ၀ိုင်းနေတဲ့ပုံပါ။ အဲဒီပုံမှာ ဘေးက လက်တစ်ဖက်နဲ့ အဲဒီလက်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ဓားကို ဖျက်ထားတယ်၊ သွေးစ သွေးနတွေကို ဖျောက်ထားတယ်ဆိုတာကို အမေရိကန် ဘလော့ ဂါတစ် ဦးက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း ရိုက်တာက တောင်းပန်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ် ချက်မရှိကြောင်းပါ ရှင်းလင်းခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဓာတ်ပုံမှာ ဖုံးကွယ်ပေးထားတာပါ။ မှုခင်းသတင်းတွေမှာ အဓိကကျပါတယ်။ ကျူးလွန်သူနဲ့ ကျူးလွန်ခံရသူရဲ့ မျက်နှာကို အများအားဖြင့် ဖုံးကွယ်ပေးထားမှုပါ။ ကျူးလွန်ခံရသူအတွက်က ပိုအရေးပါပါတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ဦးဆိုရင် သူ့မျက်နှာသာမက သူ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပါ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖုံးကွယ်ပေးရပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ အများကို မထိခိုက်စေဘဲ အကောင်းဘက်ကို ရောက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကဲတဲ့ ဖော်ပြမှုမျိုးဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ အပြစ်လို့ ပြောလို့မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မလိုအပ်ဘဲ ပြူးတူးပြဲတဲ အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေတဲ့ ဖော်ပြမှုမျိုးကိုတော့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတယ်လို့ ဆိုလို့မရပါဘူး။
တစ်ပါးသူ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်၊မရောက်
အဝေးကြီးထိ ဆွဲနိုင်တဲ့ မှန်ဘီးလူတွေ ပေါ်လာတာရယ်၊ လူစိတ်ဝင်စားစေတဲ့ ပုံတွေ အပေါ် တောင်း ဆိုမှုက မြင့်လာတာရယ်က ကိုယ်ရေး လုံခြုံမှု ချိုးဖောက်ရာရောက်၊ မရောက် ဆိုတဲ့ကိစ္စကို အဓိက ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာဖြစ်လာစေတာပါ။ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချိန်မှာ အသိမပေးဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူတာဟာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီသလား၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ၊ ထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနဲ့ ဆိုင်တာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသင့်သလား။ ဘယ်လို အချိန်မျိုး၊ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဆိုရင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုကို ချိုးဖောက် နှောင့် ယှက်ရာ ရောက်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက စိန်ခေါ်နေပါတယ်။
ဒါက လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းဆီနဲ့ပါ ဆိုင်သွားပါတယ်။ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီအဆင့်အတန်းတော့ အနည်းဆုံးရှိရမယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူတစ်ဦး၊ တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဟာ အများပြည်သူသိသင့်တဲ့ အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အနေအထားရှိမှသာ ပင်မ ဂျာနယ် လစ်ဇင် ရေစီးကြောင်းထဲက ဂျာနယ်လစ်တွေက သတင်းဓာတ်ပုံနဲ့ သတင်းရယူကြပါတယ်။ ပုံမှန်အာြး ဖင့်ေ တာ့ မလုပ်ကြပါဘူး။
ဓာတ်ပုံများသည် ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းမှုရှိ၊မရှိ၊ ဖော်ပြရန်သင့်၊ မသင့်
ကလေးကနေ အဘိုးအဘွား အထိ လူတကာရဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ သတင်းစာတွေမှာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ ပုံတွေ၊ အရမ်းကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကို ဖော်ပြဖို့ မသင့်ဘူးလို့ ယေဘုယျ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အထွေထွေ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ သတင်းစာများဟာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရ ပေါ်လွင်လွန်း၊ ပွင့်လင်းလွန်းတဲ့ပုံတွေကိုပါ ရှောင်ရှားကြပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ အရွယ်ေ ရာက်ပြီးသူများအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်းများကတော့ သီးခြားရှိပါတယ်။
ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းမှု ရှိ၊ မရှိဆိုတာ ပထမဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အချက်ပါ။ ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာက ဖော်ပြဖို့ သင့်၊ မသင့်ဆိုတာပါ။ ဒီအခါမှာထည့်သွင်းဖော်ပြမှုရဲ့ သဘောရင်းခံဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ ကာလတုန်းက ပူလစ်ဇာဆုရပုံ တစ်ပုံ ရှိပါတယ်။ Nick Ut ရဲ့ Napalm Girl ဆိုတဲ့ ပုံပါ။ (ဒီဆောင်းပါးမှာ အဲဒီပုံကို ကျွန်တော်တို့ ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းအရ မသင့်တော်ဘူးလို့ ယူဆလို့ အောက်ပိုင်းကို အုပ်ပြီးဖော်ပြပါတယ်)။ Napalm ဆိုတာက ရေနံဆီ (ဒါမ မဟုတ်)အလား တူ လောင်စာနဲ့ ရော ထားတဲ့ ကော်ရည်လိုချွဲပစ်တဲ့ အဆီတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲမှာသုံးတဲ့ လက်နက်တစ်ခုပါ။ ဒီလက်နက်နဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကိုယ်မှာ အ၀တ်မကပ်တော့တဲ့ မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက် အပါအ၀င် ကလေး ငယ်ေ တွ ပြေးလွှားနေတဲ့ပုံကို နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာက မျက်နှာဖုံးတင်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကျင့်ဝတ် ပိုင်းအရ ခက်ခဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပါ။ အရွယ်မရောက်သေးသူ(minor) ရဲ့ လုံးတီးပုံ (Nudity) လည်းဖြစ် သလို ဖတ်ရှုတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက်လည်း အထိတ်တလန့် ဖြစ်စရာပါ။ ဒီအချိန်မှာ ခွင့်ပြုချက် သွားယူလို့မရတော့ ကလေး ငယ်ရဲ့ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကိုလည်း ချိုးဖောက်တဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီပုံဟာ ပူလစ်ဇာဆု ရခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲရဲ့ ဆိုးရွားမှုကို အပီပြင်ဆုံး ဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံလည်းဖြစ်ခဲ့သလို ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ အဆုံးသတ်ရေး နယ်ပယ်အသီးသီးက ၀ိုင်းဝန်းေ တာင်းဆိုကြဖို့လည်း လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွား အတွက် တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှန်၊ စစ်ပွဲရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံကို ဖော်ပြဖို့ ပုံမှန်ကန့်သတ်မှုတွေကို ချိုးဖျက်ခဲ့ရတာကိုတော့ ကျင့် ၀တ်နဲ့မညီဘူး၊ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူးဆိုတာကို ဒီပုံက သက်သေပြနေပါတယ်။
လတ်တလောဖြစ်စဉ်အရ ပြောရရင်တော့ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းက တိုင်းမ်မ ဂ္ဂဇင်းက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နှိပ် စက်ခံရလို့ ယောက်ျားဘက် ဆွေမျိုးတွေဆီကနေ ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ အာဖဂန်မိန်းကလေးကို တာလီဘန် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက နှာခေါင်းနဲ့ နာရွက်တွေဖြတ်လိုက်လို့ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်ေ နတဲ့ပုံပါ။ ဒီပုံကြီးကို တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းက မျက်နှာဖုံးတင်ခဲ့ တာပါ။ တာလီဘန်တွေလက်အောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုနေ နေရတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြဖို့အတွက် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတယ်လို့ ယူဆ ရတဲ့ပုံကို ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဒီပုံကြောင့် တာလီဘန်တွေလက်အောက်မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပြန်လည်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့ ရန်ပုံငွေထူထောင်တာတွေ၊ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကမ္ဘာမှာ ရှိနေသေး ပါလား၊ မရှိသင့်တော့တဲ့ကိစ္စ၊ တိုက်ဖျက်သင့်တဲ့ကိစ္စပါလားဆိုတဲ့ အသိအမြင် ပျံ့နှံ့မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ခြုံပြောရရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနဲ့ အများကို မထိခိုက်စေဘဲ အကောင်းဘက်ကို ရောက်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကဲတဲ့ ဖော်ပြမှုမျိုးဟာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းအရ အပြစ်လို့ပြောလို့ မရဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မလို အပ်ဘဲ ပြူးတူးပြဲတဲ အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေတဲ့ ဖော်ပြမှုမျိုးကိုတော့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီတယ်လို့ဆိုလို့ မရပါဘူး။
အဓိကကျတာကတော့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေကို ဖော်ပြရာမှာ ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့ အခြေခံမူတွေဖြစ်တဲ့ အမှန်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယုံကြည် စိတ်ချနိုင်လောက်တဲ့ ဖော်ပြမှုမျိုးနဲ့ တာဝန်ယူမှုရှိစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ အချက် တွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ေ ဖ်ာပြဖို့ပါပဲ။
သတင်းဓာတ်ပုံဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဖော်ပြမှုများ ကောက်နှုတ်ချက်
ဓာတ်ပုံဂျာနယ်လစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိရမည်။ အများပြည်သူကို လမ်းလွဲစေနိုင်သော ဓာတ်ပုံပြင်ဆင်ဖော်ပြမှုမျိုး လုပ်မည်မဟုတ်။
ဓာတ်ပုံကို မွမ်းမံထားမှုရှိပါက ပုံစာတွင် ထည့်သွင်း ရှင်းလင်းပါမည်။
ပြင်ဆင်ထားသည့် ပုံဖြစ်ပါက ပြင်ဆင်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြပါမည်။
Canadian Association of Journalists Ethic Guideline
ဂျာနယ်လစ်များသည် မည်သို့သောအခါတွင်မှ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုပါ အကြောင်းအရာကို ပုံဖျက်ေ ဖ်ာပြခြင်း မပြုလုပ်သင့်။ နည်းပညာပိုင်းအရ သန့်စင်ကြည်လင်အောင်လုပ်မှုမှာမူ ခွင့်ပြုရ မည်ဖြစ် သည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော၊ ဖန်တီးထားသော ပုံများကို (ယင်းသို့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားေ ကြာင်း) ဖော်ပြပေးရမည်။
တိကျပြီးပါဝင်သင့်သည်တို့ အပြည့်အ၀ စုံလင်စွာ ပါဝင်ရမည်။
ဓာတ်ပုံကို မွမ်းမံခွင့်အား အလွဲသုံးပြီး လိုသလိုပြင်ဆင်ခြင်း မပြုရ။
မှတ်တမ်းတင်သည့် အရာအားလုံးကို လေးစားသမှုရှိရမည်။ ရာဇ၀တ်မှု (သို့မဟုတ်)အနိဋ္ဌာရုံတွင် ခံစားရသူများအပေါ် ကရုဏာထားပြီး ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သော အရာများအတွက် အထူးစဉ်း စားပေးရမည်။
တစ်ဖက်သားမနှစ်သက်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခြေအနေများကို အများပြည်သူက မြင်တွေ့သိရှိ ရန်လိုအပ်လွန်းသော အခြေအနေမျိုးမှ တစ်ပါးချိုးဖောက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မပြုရ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ်တွင်ပင် ဖြစ်စဉ်ကို လွှမ်းမိုးလိုသော၊ ပြင်ဆင်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၀င်ရောက် ပတ်သက်ခြင်းမပြုရ။
တည်းဖြတ်ရာတွင် ဓာတ်ပုံ၏ ပါဝင်သောအကြောင်းအရာနှင့် သတင်းစကား၏ ၀ိသေသလက္ခဏာကို (မပျက်စီးစေရန်)ထိန်းသိမ်းရမည်။ ကြည့်ရှုသူကို အလွဲမြင်စေရန်၊ ရိုက်ကူးသည့်အရာကို အလွဲဖြစ်စေရန် မည်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် မှ မသမာသောရည်ရွယ်မှုဖြင့် ပေါင်းထည့်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုရ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် အခိုက်ကာလ၏ ၀ိသေသလက္ခဏာကို လေးစားရမည်။
National Press Photographers Association(US) Code of Conduct
(1) Ethics for Journalists By Richard Keeble
(2) Photojournalism By Carolynne Burkholder
(3) Ethics in Photojournalism: Past, Present, and Future By Daniel R. Bersak
(4) Photojournalism :An Ethical Approach By Paul Martin Lester